Ary inona no ataoko amin'ny sidina ahy? Krizy manerantany | Fitsangatsanganana tanteraka
Ary inona no ataoko amin'ny sidina ahy? Krizy manerantany
Ny fidirana eo amin'ny sehatry ny Coronavirus Nivadika ny planeta manontolo. Ny firenena sasany dia nandalo na nilentika tamin'ny dingana areti-mifindra mahery vaika ary ny firenena hafa dia manomboka mahita ny isan'ny tranga miseho ao anatin'ny faritanin'izy ireo.
Izay natomboka tany Sina ho fandrahonana kely dia lasa ahiahin'ny olom-pirenena rehetra. Ny hafainganam-pandeha sy ny fielezan'ny fampielezana azy ary ny tsy fisian'ny vaksininy sy ny fitsaboana dia nahatonga olona maherin'ny 250.000 avy amin'ny vazan-tany rehetra tratry ny aretina ary maherin'ny 10.000 no maty. Izany no antony anerena ny governemanta foibe isam-pirenena handray fepetra miavaka.
1 Avalanche amin'ny fanafoanana. Ary ny sidina nataoko?
2 Ny lalana fitsoahana avy amin'ny tapakila mora vidy
Avalanche amin'ny fanafoanana. Ary ny sidina nataoko?
Any Espana, ny fielezan'ny virus faingana dia midika izany fa, mba hisorohana ny fitohizan'ny fiparitahan'ny rafitra ara-pahasalamana nasionaly, dia namoaka didy ny governemanta toetran'ny fanairana izay manery ny bara, fivarotana, orinasa hakatona ary nandrara ny fivezivezena malalaka ho an'ny olona, ​​ka manery ny olom-pirenena hijanona hidina ao an-tranony.
Ity fepetra ity, mazava ho azy, dia misy fiatraikany amin'ny sidina, izay nijaly a avalanche ny fanafoanana. Araka ny lalàna eropeana, ny mpandeha dia mahazo famerenam-bola amin'ny vidin'ny tapakilan'izy ireo noho ny fanafoanana ny sidina. Na eo aza izany zony izany, misy orinasa sasany mandà ny hamerina ny vola ary manolotra safidy hafa, toy ny fanemorana ny sidina na fanakalo ny tapakila ho an'ny tapakila, mitovy lanja amin'ny habetsaky ny tapakila, hividianana sidina hafa mankany amin'ny toeran-kafa amin'ny daty hafa. . Orinasa hafa kosa, manolotra ny fahafaha-manemotra ny sidina ihany.
La fanafoanana ny sidina ary famerenana ny vola ho an'ny mpanjifa dia nametraka ireo zotram-pitaterana an'habakabaka marobe amin'ny toe-javatra manahirana, indrindra noho ny tsy fahampian'ny trosa. Izay no antony itadiavany vahaolana hafa toa ireo efa voalaza. Noho io toe-javatra io, noho ny olona tsy maintsy ampodiana an-tanindrazana ary noho ny oran'ny fitarainana dia maro amin'ireo làlan'ny mpanjifa ny zotram-piaramanidina no nirodana, ka nanasarotra ny fanatanterahana izany. Manoloana ity fahitana fahasarotana ity dia maro ireo mpandeha lavitra izay aleony tsy manasarotra ny fiainany ary tsy mampiasa ny zony hamerina ny volan'ny tapakila.
Ny lalana fitsoahana avy amin'ny tapakila mora vidy
Ny zavatra mahazatra dia ny mitady ny sidina mora vidy indrindra indrindra. Marihina fa ny vidin'ny tapakila Miankina amin'ny miovaova toy ny daty azo andehanana, ny andro amin'ny herinandron'ny sidina - misy andro lafo kokoa noho ny hafa - ny faharetan'ny sidina, ny isan'ny fijanonana ary ny ora fiaingana sy ny fahatongavana.
Ny fandefasana tranokala rehetra no fomba tsara indrindra hahitana ilay iray sidina mora indrindra. Safidy iray hafa ny fampiasana a VPN ho an'ny tapakila fiaramanidina. Ary io dia ny iray amin'ireo masontsivana hafa izay misy fiatraikany amin'ny vidin'ny sidina dia ny toerana anaovana ny fikarohana.
Una VPN tambajotra tsy miankina virtoaly izy io izay ahafahana mifandray amin'ny Internet. Izy io dia fomba fifandraisana azo antoka kokoa noho ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny tambajotra virtoaly ampahibemaso, izay tsy manome fiarovana tsara ho an'ireo mpampiasa Internet amin'ny fanafihana mety hitranga. VPN manafina fonosana angona ary miditra amin'ny Internet amin'ny adiresy IP hafa noho ilay tena izy. Izany no antony ahafahan'ny VPN mamela anao handingana ny geoblocks, satria ny tambajotra tsy miankina virtoaly dia manome anao ny fahafahana misafidy firenena hafa ankoatry ny anao - amin'ity tranga ity, Espana. Io IP noforonina io no ahafahan'ny mpampiasa mandingana ny hidim-baravarana. Ohatra, any Shina dia tsy afaka miditra amin'ny Facebook ianao, fa raha mampifandray amin'ny Internet any Shina amin'ny VPN isika, izay adiresy IP misy azy, hoy ny iray, France, ilay fitaovana izay ezahantsika hampifandraisina hoe any Frantsa isika fa tsy Shina ary, noho izany, dia hamela ny fidirana amin'ny Facebook. Ity mampiavaka ny VPN ity dia ahafahantsika manao hetsika toa ny fampifandraisana amin'ny sehatra video sy ny fisafidianana ny katalaogin'io sehatra io ao amin'ny firenena misy ny VPN, fa tsy manana ny katalaogin'ny firenena misy antsika.
Izany no antony ahafahantsika mampiasa VPN sidina fikarohana toy ny hoe tany an-tany hafa isika, noho izany dia azo ahena ny vidin'ny tapakila mitovy. Izao dia mila manomboka milentika fotsiny amin'ireo pejin-tranonkala samihafa ianao mba hahitanao ny sidina mora indrindra mifanentana aminao indrindra amin'ny daty, toeram-pijanonana ...
Tsara homarihina fa ny VPN tsirairay dia manome fahafaha-mifandray amin'ny firenena maromaro. Tsy ny VPN rehetra dia mifanindry amin'ny firenena mitovy sy mitovy misy ny zom-pirenena avy aiza no handraisana ny adiresy IP, ka raha mitady firenena manokana ianao, dia tsara kokoa ny manadihady ny safidy tsirairay, hahafahanao mahazo ny fampisehoana tadiavinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ary inona no ataoko amin'ny sidina ahy? Krizy manerantany
Inona no ho hita any Salzburg